नेपाल आज | रास्ट्रपति विद्या मदनको हत्यारा नखोज्ने, केपी ओलीलाई जोगाउन जे पनि गर्ने!
रास्ट्रपति विद्या मदनको हत्यारा नखोज्ने, केपी ओलीलाई जोगाउन जे पनि गर्ने!
‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ का प्रतिपादक जननेता मदन भण्डारीको मृत्यु भएको २८ वर्ष पुरा भएको छ । तर, उनको मृत्युको कारण अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेको छैन।
मदन भण्डारीको योगदान र जवजको जगमा उनकी पत्नि विद्यादेवी भण्डारी दोहोर्याएर मुलकको राष्ट्रपति वनिन्। उनका राजनितिक सहकर्मी केपी शर्मा ओली पनि पटक– पटक प्रधानमन्त्री वनिसके। तर, तिनै भण्डारीको निधन भएको यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि उनको निधनको सत्यतथ्य वाहिर आएको छैन।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले मदन भण्डारी र जिवराज आश्रितको दुर्घटना नभएर हत्या नै भएकोमा आफू स्पष्ट रहेको बताउँछन्। आफु प्रधानमन्त्री भए हत्यारा पत्ता लगाउने भन्दै उनले धेरै पटक भाषण पनि गरे । तर, पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले भण्डारीको मृत्यु प्रकरणलाई चासोको विषय वनाएनन् ।
वरु अहिले उनको भाषण नै फेरीन थालेको छ। घटना भएको लामो समय बितिसकेको र कठिन हुने भएपनि त्यस वारेमा अनुसन्धान हुने उनका अभिब्यक्ति सुन्न पाईन्छ।
अर्कोतर्फ भण्डारी पत्नि अर्थात राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि चुपचाप छिन् । देशको राजनीतिक उतार चढाव तथा सत्ता स्वार्थका लागि जस्तो सुकै काम गर्न तयार हुन्छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीको इसारामा रातारात संसद विघटन गर्ने देखि कस्लाई कति वेला प्रधानमन्त्री वनाउने भन्ने विषयमा उनकै इच्छा अनुसार भईरहेको छ । यति मात्र होईन, उनले यस विचमा लगभग १ दर्जन अध्यादेश जारी गरिसकिन । पछिल्लो पटक नागरिक्ता अध्यादेश जारी भयो ।
तर, तिनै मदन भण्डारीको मृत्युको विषयमा उनको ध्यान जान सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई परेको वेला जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार हुने विद्या भण्डारी मदको मृत्युको विषयलाई अनुशन्धान गर्ने विषयमा किन उदासिन छिन् ? भन्ने विषय चासोको विषय वनेको छ।
०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको जिप दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न तत्कालिन एमालेले ओलीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति समेत वनाएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा घटनाको प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार चालक अमर लामा गाडी छोडेर माथि नै हामफालेका थिए । पछि तिनै अमर लामाको पनि हत्या भयो । त्यो हत्याको पनि छानबिन गरिएको छैन ।
दाशढुंगा काण्डको छानबिन राम्रोसँग नभएको भनेर एमालेले त्यसवेला आन्दोलन पनि गर्यो । तर, जव त्यसै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार वन्यो तव छानविनको उच्चारण पनि नभएको पार्टीका नेताहरु नै वताउँछन् । ओली पटक पटक प्रधानमन्त्री र भण्डारी पत्नि विद्या राष्ट्रपति हुँदा समेत मदनको हत्याराको खोजविन नहुनु आश्चार्य भएको उनीहरुको भनाई छ ।
केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जनताको बहुदलीय जनवाद जननेता मदन भण्डारी